Aqalka sare ee baarlamanka İtoobiya oo ansixiyay in dib loo dhigo doorashada - Tilmaan Media
Baarlamanka dalka itoobiya ayaa ansixiyay in muddo hal sano ah dib loo dhigo doorashadii lafilayay in ay dhacdo bisha August ee sanadkan 2020. Arintaan ayaa ka dhigan in raysal wasaare Abiy Ahmed oo xilka sii hayn doono ilaa hal sano oo kale kadib marka wakhtigiisu dhamaado. Arintaan ayaa kusoo beegmaysa labo maalmood kadib markii afhayeenka aqalka sare ee baarlamanku is casishay.
Sida uu sheegay afhayeen aqalka sare Gebru Gebreslassie, aqalka sare ayaa ansixiyay in la kordhiyo muddo xileedka sharcidajiyeyaasha heer federaal iyo heer ismaamul goboleedba muddo u dhaxaysa 9 illaa 12 bilood.
Gebru Gebreslassie, ayaa sheegay in doorashooyinku dhici doonaan kadib marka hayadaha caafimaadka dalku sheegaan in Korono Fayras uusan khattar ku ahayn caafimaadka guud ee dalka.Itoobiya ayaa diiwaan galisay 2,336 bukaan oo uu kudhacay Korona Fayras iyo 32 dhimasho ay maalinkii Arbacada.
Go,aanka dib u dhigista doorashada ayaa waxaa ka hor yimid mucaaradka itoobiya oo isugu jira Oromo iyo Tigree. xisbiga Tigreega ee TPLF ayaa ku hanjabay in doorasho ka samayn doonaan gobolka Tigrayga haddii doorashada dib loo dhigo, waxaana arinkaas ka jawaabay raysal wasaare Abiy Ahmed oo sheegay in dowladdu faragalin doonto haddii gobol gaar ah dastuurka dalka jabiyo.